Element Society - Ọhụụ Na-eto Eto Na-eto Eto Na-eto eto Sheffield
Anyị bụ ọrụ ebere ndị ntorobịa na-abaghị uru nke dabeere na Sheffield, na-ebute mmepe, mmemme mmekọrịta na mmemme maka ndị na-eto eto na ndị okenye. Anyị na-eme ka ndị na-eto eto nwee ike ime mgbanwe dị mma n'obodo ha, na-ebuli ọchịchọ ha ma bụrụ ndị nlereanya nke ndị ọgbọ ha.
Ị bụ agadi 15 - 17 ma na-achọ inweta ọtụtụ n'ime oge okpomọkụ gị?
Jikọọ NCS maka ahụmahụ dị ukwuu! Zute ndị ọhụrụ, mee enyi ogologo oge ma nweta nkà ọhụrụ maka CV gị.
Chọpụta ihe gbasara NCS
Mụta banyere ahụmahụ ndị ọzọ
Ndị nne na nna na ndị nche
Ị nwere nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị, ma ọ bụ na ị na-elekọta onye na-eto eto?
Chọpụta otú usoro 2019 NCS nwere ike isi nye ha oge okpomọkụ na nkà ha agaghị echezọ.
Ajụjụ banyere ahụmahụ ahụ
O na-efu ihe kariri i nwere ike iche
Ụlọ akwụkwọ na nkuzi
Ị bụ onye na - arụ ọrụ na ndị na - eto eto?
Chọpụta otú usoro NCS nwere ike isi mee ka ha nwee ahụmahụ ọhụrụ, mepee nkà ọhụụ ma mee ndị enyi ọhụrụ, ndị ogologo ndụ.
Oge ọhụụ na oge ezumike
Anyị nwere nkwenkwe 3
Site n'enye nkwado na nkwenkwe onwe onye, ​​ndị na-eto eto nwere ike imeta ihe a na-apụghị ikweta
Dị ka onye ntorobịa na-eme ebere, anyị maara na e nyere ngwá ọrụ ndị kwesịrị ekwesị, ohere na nkwado, enweghi ike ikweta.
Ihe atụ ụfọdụ nke ndị na-eto eto na-enweta ihe a na-apụghị ikwenye ekwenye na Element Society gụnyere: ịkwado akpa egwuregwu mgbatị, ịzụ ahịa na ụlọ ahịa, ịmepụta na mgbakọ na-arụ ọrụ, ịlụso mmegbu na ịkpa ókè agbụrụ, imegide ohere nkwarụ na ya, ọtụtụ ihe. Ihe ga - emetụta gị bụ na ọ bụghị naanị site na omenala 'elu achievers' ka onye ọ bụla na - enweta.
Na-enye ndị na-eto eto ikike zuru oke iji mee ihe dị mma n'obodo ha
Anyị na-agbalite mmemme ọhụrụ mgbe niile iji meziwanye akụkụ nile nke ọha mmadụ. Ndị na-eto eto nọ n'obi nke ihe ọhụrụ ọ bụla anyị mere mgbe anyị bụ nwata.
Ụfọdụ n'ime ọrụ anyị bụ ndị na-eto eto nke Sheffield na South Yorkshire. Ọbụna ọtụtụ ọrụ anyị nwere ndị na-eto eto na-enwe ọganihu site na ndị na-arụ ọrụ na-akwụ ụgwọ. Ihe oru anyi nile bu ndi na-eto eto na-etinye aka na onodu o bula - site n'echiche na atumatu, inye aka na nyocha.
Ịkwalite ndị na-eto eto ịghọ ezigbo ndị nlereanya nye ndị gbara ha gburugburu
Ịghọta na ndị nlereanya nke ndị ọgbọ bụ ihe dị ike n'ịzụlite ndị ọzọ na-eto eto bụ isi maka ọtụtụ n'ime ụzọ anyị.
Dị ka nke a, anyị na-enye ohere na ohere iji nye aka na ọrụ ọrụ na-arụ ọrụ ebe ha nwere ike ịbụ ezigbo ndị nlereanya. Nke a na-agụnye ịbụ onye so n'Òtù Ntorobịa anyị nke na-akpụpụta atụmatụ nke nzukọ na ntụziaka nke ọrụ anyị. Nke a bụ otu n'ime ọtụtụ ụzọ anyị si edozi ụkpụrụ omume kachasị mma dịka ọrụ ebere nke ndị ntorobịa.
Ọ bụrụ na ịkekọrịta ọhụụ na enweghị ọchịchọ na-enweghị isi iji mee ka mmetụta dị mma n'ụwa, biko banye na aka. Gwa anyị banyere echiche gị na ahụmịhe gị, ma ịchọrọ isoro anyị rụọ ọrụ n'ihe ị na-eme, ma ọ bụ maka anyị na ihe anyị na-eme.
Kpọọ anyị - 0114 2999 210
Email anyị - hello@elementsociety.co.uk
Ndị mmekọ na ndị na - akwado ya gụnyere:
EFL TRUST // NCS TRUST // Ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ // SHEFFIELD FUTURES // Nnukwu ihe // N'ezie NEET // SHEFFIELD HALLAM // OZI NKE SHEFFIELD